ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုများ - ဒဏ္myာရီလောသို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်လော။ (၂၀၁၁) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
မှတ်ချက်များ - လေ့လာမှုက -ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလေ့လာခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ"မှလွဲ။နောက်ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုမှာအသုံးပြုသောကွန်ဒုံးရှိခြင်းမမြင့်မားလေးသာမှု"။
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့မှကြားရသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့်၎င်းတို့တွင်လိင်အတွေ့အကြုံနည်းသည်ဟုဆိုခြင်းမှာအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ အတော်များများကမိန်းကလေးစစ်စစ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများထက်ဆွဲဆောင်မှုအားနည်းပြီးအချို့မှာနာတာရှည် ED နှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဖော်ပြပါ“ ရောဂါလက္ခဏာများ” သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရှောင်ခြင်းနှင့်အတူလွှတ်ပေးကြောင်းသတိပြုပါ။
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2011 အောက်တိုဘာ; 40 (5): 1027-35 ။ EPub 2011 ဖေဖော်ဝါရီ3။
Luder MT, Pittet ငါ, Berchtold တစ်ဦးက, Akréကို C, Michaud PA ဆိုပြီး, Surís JC.
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး, လူမှုရေး၏ Institute နှငျ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆေးပညာ, Lausanne ၏ Center က Hospitalier တက္ကသိုလ်နှင့်ကျောင်းများ Vaudois နှင့်တက္ကသိုလ်, Bugnon, 17, 1005 Lausanne, ဆွစ်ဇာလန်သုတေသနအုပ်စု။
ဤလေ့လာမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်၊ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိခြင်း၊ မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိဆန္ဒရှိမှုကဤဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအသင်းအဖွဲ့များကိုပြောင်းလဲသည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်အွန်လိုင်းအပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြသောလူငယ်များ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ အချက်အလက်များကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်စစ်တမ်းမှကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပုဒ်မ၊ စာရွက်နှင့်ခဲတံမေးခွန်းလွှာဖြစ်သည်။ အသက် ၁၆-၂၀ အရွယ်ဆယ်ကျော်သက် ၇၅၂၉ မှ ၆၀၅၄ (အမျိုးသား ၃၂၈၃) သည်ပြီးခဲ့သည့်လကအင်တာနက်ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုကိုခံယူခဲ့သည်။ အထီးများကိုအုပ်စုသုံးစုခွဲထားသည် (လိုချင်သောထိတွေ့မှု ၂၉.၂%၊ မလိုလားအပ်သောထိတွေ့မှု၊ ၄၆.၇%၊ ထိတွေ့မှုမရှိ၊ ၂၄.၁%) နှင့်အမျိုးသမီးများအားအုပ်စုနှစ်စုခွဲခြားထားသည် (ထိတွေ့မှု ၃၅.၉%၊ ထိတွေ့မှုမရှိ၊ ၆၄.၁%) ။ အဓိကရလဒ်ရလဒ်များမှာလူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထိတွေ့သူယောက်ျားပေါင်း (တမင်တကာသို့မဟုတ်မပါ) ရှိခြင်းမမြင့်မားလေးသာမှုနောက်ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုမှာကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း မှလွဲ. အဆိုပါအုပ်စုများတွင်မဆိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ bi / လိင်တူဆက်ဆံသူ orientation ကိုနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို parameters တွေကိုဖြစ်စေဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ ထို့အပြင်ယင်းအလိုထိတွေ့မှုအုပ်စုတွင်ယောက်ျားအာရုံ-ရှာဖွေနေသူဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိတွေ့မိန်းကလေးငယ်များကျောင်းသားများ, မြင့်မားသောအာရုံခံစားမှု-ရှာဖွေနေသူစောစောရင့်ကျက်နှင့်ပညာတတ်ဖခင်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုများ၏စိတ်အားထက်သန်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မထင်ထားဘူးကြောင်းဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါကြောင်းကောက်ချက်ချ။